Indlu yesihlahla saseCreekside ehlala ehlathini elingaphakathi
Likely, British Columbia, i-Canada
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Howard And Elaine
Le ndlu yezihlahla yesizini (May-15 -Sept 30) etholakala eduze komfula omkhulu i-Quesnel, i-Shaky Knees Tree House ihlala amamitha angu-7 ukuphakama phakathi kwezihlahla zemisedari ezibomvu zaseNtshonalanga kanye ne-Douglas fir. Umpheme obanzi ozungezayo ubheka ihlathi elihlala liluhlaza elixutshwe namaqabunga anehlathi eliluhlaza ezinyaweni zalo. Kuzwakala umsindo ophumuzayo njengoba i-Youngren creek igxuma phansi intaba eduze kwendlu yesihlahla. Le ndawo yangasese kakhulu ihlanganisa ichibi elinempophoma encane. I-Shaky Knees iwukuzizwisa kwe-eco-friendly, okungaxhumekile.
I-Shaky Knees ifinyeleleka kalula ngomgwaqo wayo oyimfihlo nokhanyiswe kahle, nokungena ezingeni. Indlu yesihlahla inendawo enkulu, enobungani be-yoga, esonga ngezihlalo ne-hammock ukuze uphumule. Ikhishi elivulekile nendawo yokuhlala ziphansi phezulu kunombhede wendlovukazi endaweni ephezulu. Igumbi lokugezela eligcwele elinamanzi ashisayo afunwayo kanye nendlu yangasese yokwenza umquba nayo iphansi kakhulu.
Ikhishi linakho konke okudingayo ukuze uguqule okubambe osukwini lwakho kube ukudla okumnandi. I-hot air popper namaphophukhoni ahlala ekhona.
Kukhona izinongo eziyisisekelo, ikhofi, itiye, ushokoledi oshisayo, nama-condiments.....kanye nokunye okwengeziwe okumbalwa uma kwenzeka ukhohlwe okuthile!!!
Amapani egolide namafosholo kungokwakho ongakusebenzisa njengoba uhlola indawo yomlando yeGold Rush.
5.0 ·102 okushiwo abanye
5.0 · 102 okushiwo abanye
I-Shaky Knees ingaphansi kwekhilomitha elingu-1 (uhambo lwamaminithi angu-10) ukusuka enkabeni yedolobha Cishe, B.C., idolobha elincane elinabantu abangu-350. Lapha uzothola iphabhu yendawo, izindawo zokudlela kanye nesitolo esijwayelekile.
Idolobhana laseMhlabeni lingelinye lamadolobha amadala ambalwa asekhona kusukela ku-Cariboo Gold Rush Days anenqwaba yegolide lokuphehla igolide, ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni, ukudoba okusezingeni lomhlaba, i-kayaking, ukubuka izilwane zasendle neminye imisebenzi eminingi.
Ibungazwe ngu-Howard And Elaine
U-Howard no-Elaine bathatha umhlalaphansi e-Okanagan futhi bathuthela e-Civil, befuna indawo abangayibiza ngokuthi ikhaya. Bathanda ihlathi lemvula elingaphakathi nakho konke elinakho. Bobabili bangabaqoqi bezinto zakudala futhi lokhu kubonakala eduze kwempahla yabo kanye nendlu yesihlahla.
U-Howard no-Elaine bakhule noMndeni waseSwitzerland uRobinson futhi babehlale bephupha ngokwakha indlu yesihlahla. I-Shaky Knees iqale iphrojekthi yabazukulu, kodwa yafika yaba ngendlela oyibona ngayo namuhla.
U-Howard no-Elaine bahlala endaweni eyodwa, endaweni engabonakali endlini esesihlahleni. Ahlala etholakala kunoma imiphi imibuzo noma izinkathazo futhi angakukhomba lapho ubheka khona abadobi abasezingeni lomhlaba nabasebenza nge-eco-tour. Ngaphezu kwakho konke, bajabule kakhulu ukwabelana nawe ngendlu yabo yesihlahla samaphupho.
U-Howard no-Elaine bathatha umhlalaphansi e-Okanagan futhi bathuthela e-Civil, befuna indawo abangayibiza ngokuthi ikhaya. Bathanda ihlathi lemvula elingaphakathi nakho konke elina…
UHoward And Elaine Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Likely namaphethelo